WOWOW Wall Filed Mount Filler Na Brusel Nickel
Home / Faucets kichin / Ikpokoro efere Faucets / WOWOW ite igwe nfuli foset N'ime stovu Na ncha nchara Nickel
WOWOW Pot Filler Faucet karịrị Ebe a na-echekwa na Nickel Nickel
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 25 ahịa Fim
(25 ahịa reviews)
Amazon US Amaokwu CA
Ikike nhicha dị mfe nke ihe eji eme ya na-eme ite kichin kichin kwesịrị ekwesị maka ojiji ịdị ọcha.
Ejiri ihe igwe anaghị agba nchara, ite nhicha ite kichin na-egbochi oke nchara.
A na-agbanye mmanụ ite nwere okpukpu abụọ, si otú ahụ, ọ dịghị mfe ịgbawa ma ọ bụ ọdịdị.
Ngwaahịa a dị mfe iji ma na-enweghị mgbalị iji jide ya.
Ntụziaka nwụnye 2311100
Tinye ihe eji emetuta aka na kichin gi nke oma ihe eji agba ocha Ulo Eke Ochie 2311100 nke gunyere silhouette a na-egwu egwu.
Ọ dị mma maka nnukwu ite esi esi nri n’ime ite gị ji aka gị jupụta ite nri gị n’emeghị ka iburu ha si n’ime ebe a na-esi na stovu.
Akụrụngwa akụrụngwa: Kpuchie n'okpuru Mbinye aka Akụrụngwa dị oke ndụ.
Gbanyụọ ugboro abụọ na-eme ka onye ahịa ya gbanyụọ mmiri ahụ na mgbidi ma ọ bụ nke aka ya, yabụ ijikwa iyi mmiri ahụ na usoro eji.
Uclọ ahụ Faucet gbakọtara na ọla bụ ihe na-eguzogide oke nchara na nhọrọ kachasị mma iji guzogide oke okpomọkụ.
Mbido otu ụzọ na - ejigide eriri abụọ na - eme ka ite ahụ sie ike mgbe a na - ejighi ya.
Nkọwapụta: Elu: 9-1 / 2 ″ (ala n'akụkụ elu nke ọkpọkọ mmiri).
Spout Elu: 2-3 / 4 ″ (etiti mgbidi ahụ ka ọpụpụ).
Ọsọ ọsọ: 1.8 gallons-per-daqiiu Faucet.
SKU: 2311100 Categories: Faucets kichin, Ikpokoro efere Faucets Tags: Nickel azọrọ, Ọkpụ ite, Mgbidi gbara
Okpomkpu ite ji agbaji okpukpu abụọ ejiri Nickel
Commercial sink foset / Oge gboo / 2 emefu
20 sentimita asatọ
Ebe a na-etinye aka / lever
N'aka ekpe ma ọ bụ aka nri
Ihe so na ya
Pot dịanyụọ ọkpọkọ / NPT njikọ; Neoperl ABS onye nyocha; Arịọnụ Ngwa (German Fischer naịlọn arịlịka bolt)
Ahụla m ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ maka nnukwu ego. Nke a bụ nnukwu ọnụahịa, enwere m ya ma ọ bụrụ na ọ wụnye ya mana ọ bụ nnukwu ego na ezigbo mma.
Anyị zụrụ ndị a maka tub, ebe anyị nwere ọkpọkọ dị iche iche na-abịa site na mgbidi kama oghere dị iche iche maka ịgwakọta.
Emere ihe niile nke ọma. Arụ ọrụ ebube. Nnukwu ụlọ. Ihe siri ike na nke ọma. Yak mmọ ẹdu ke nsinsi!
Ọcha dị ọcha na usoro valvụ abụọ na-eme ihe dị mma iji zere drips mgbe emechiri ya. Nsogbu dị na ite a bụ na ogwe aka anaghị adị n'akụkụ nke na ọ dị ka ọ na-agbada ntakịrị. Mmelite: companylọ ọrụ ahụ hụrụ nyocha m wee rute ma kwuo na m nwetara ngwaahịa nwere nkwarụ wee zigara m onye ọhụụ enweghị ajụjụ a jụrụ. Ha ziri ezi, nke ọhụrụ ahụ dị mma. Ezigbo ọrụ ndị ahịa
Awesome enweghị m ike ikwu okwu gbasara ite a. Onye ọ bụla bịara n’ụlọ m hụrụ ya n’anya. Ọrụ ndị ahịa mara mma enweghị m ike ịrịọ maka ndozi ọrụ ka mma.
N'anya imewe. Na-eche na o siri ike. Aga m azụta otu site na Delta n'ụlọ Depot dị ka nke a mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400 $, yabụ ekpebiri m na nke a mgbe m gụsịrị nyocha. Obi dị m ụtọ na m nwetara ya, mana m ga-eziga eserese mgbe emechara WOWOW. Ọgbara ọhụụ na ịhụ n'anya ọ na-adị.
Enwere afọ ojuju na ite a. Pọlụm wụnyere ya ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. M hụrụ n'anya ụzọ ya anya na price bụ nnọọ ihe ezi uche. Ndị na-ere ere nabatara m ma zaa ajụjụ m banyere ngwaahịa a.
Ahuru m ite a n'anya. Agatụghị m eche n’echiche otú ọ ga-esi dịrị mma. Mmiri na-aga nke ọma ma ghara ịgbaji. Enwekwara m kọfị kọfị n'akụkụ stovu m, ogwe aka wee ruo oke mmiri.
M nwere ịzụta onu hụrụ maka m countertop na-eme ụfọdụ ndị ọzọ n'okpuru counter mgbanwe iji nweta ya. N'otu oge na ya ugbu a zuru okè! A naghị edozi ọnọdụ ahụ. Mmadu aghaghi iche banyere on on / off onodu nke aka abuo iji nweta ya ma ngbacha ma nchapu. Ewezuga nke a bụ ịma mma maka ego ahụ.
Ihe ite ite a adịghị ọnụ, ọ dịkwa mma ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ọ bụ matte oji n'isi. Ọ gbatịrị n'ụzọ niile ruo onye na-ere ọkụ n'ihu. Ọ na-emegharị mfe ma dị mfe ịwụnye. Ọ nwere ezigbo iyi mmiri na-asọba.
Ọnụ ego dị ukwuu, na-arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya. Imecha anya ọma, ezigbo mma. Eleghara anya na-eduga n'efu. Achọrọ m na ọ bịara na ejiri aka abụọ dị ka ọtụtụ na-eme mana ha niile na m akwado.
Nke a bụ nnukwu mgbakwunye na kichin anyị. Ndị ọrụ ngo ahụ na-arụ ọrụ ahụ masịrị ya nke ukwuu na ọ ga-etinye otu n'onwe ya. Ọ dị mma! Onye ọ bụla chere na ọ dị mma.
Obi dị gị ezigbo ụtọ na ịdị mfe yana nrụnye dị mfe. Ọmarịcha kichin azụmaahịa m. Enwere ike iji ya ebe ọ bụla. Maa kwadoro.
Naanị anyị rụzigharị kichin anyị ma tinye ọkwa ite mara mma a. Ọma wuru na wee mfe!
Hụ ọkpọ a n'anya. Na-arụ ọrụ dị ukwuu! Igodo nke abụọ on / gbanyụọ na-arụ ọrụ dị ukwuu ka ịghara irufe ọkụ ọkụ iji gbanye.
Anyị ji ọkpọkọ mmiri na-asa ahụ n’ime ime ụlọ ịwụ anyị. Ntinye dị mfe ma ọ dị oke mma!
Nke a foset bụ nnọọ ọmarịcha na ị na-apụghị iti ndị price! Enwere m nchegbu na ọ ga-abụ ihe nzuzu mana ọ na-eme nke ọma.
The ụbọchị mgbe na-anata ngwaahịa, M malitere nwụnye nke m ite filler. Ọnụ ọgụgụ nke PTFE eri teepu zuru ezu. Mgbe oge mbụ m na-emeghị iji wụnye n'ihi na nke ukwuu teepu, ndị fọdụrụ PTFE eri teepu ka zuru ezu m nke abụọ echichi. Mgbe echichi ahụ wuchara, emere m ọtụtụ ule, ọ dịghịkwa mmiri mmiri mebiri!
Mbupu ahụ dị ngwa, enwetara m ngwaahịa ahụ n'ụbọchị nke atọ mgbe azụtara m. Kichin m rụzigharịrị ngwa ngwa chọrọ ịwụnye pọmpụ. Kichin na-enweghị ọkpọ mmiri anaghị arụ ọrụ nke ọma. Achọrọ m ịwụnye ọkpọ mmiri nke ite na mgbidi. Akwa-mma PTFE eri akara teepu dị ezigbo mkpa maka nwụnye ọrụ. Ekele maka akwa PTFE eri akara teepu nke ndị na-ere ya nyere. Ego ahụ buru ibu nke ukwuu ma o zuru m iji ya 2-3 ugboro.
Ite a kpokọtara ọkpọkọ na-eme ka kichin m rụọ ọrụ nke ọma. N’oge gara aga, ọ na-adịkarị m mkpa ite ite dị arọ iji nweta mmiri n’ọdọ mmiri ma ọ bụ iwere mmiri na arịa ndị ọzọ gbanye n’ime ite ahụ. Nke a bụ ihe na-eweta nsogbu na-agwụ ike. Mgbe m na-arụzigharị ebe anyị na-esi nri, m mere ihe di m nke ọma ka ọ wụnye ọkpọkọ ite mmiri. Piper ite filler foset bụ otu n'ime mgbalị anyị na anyị nwere afọ ojuju na ọkpọkọ a. A na-ejikarị ọla kọpa mee ya, elu ya dịkwa oyi akwa electroplated ojii, nke na-adịcha mma na mma. Mgbe arụnyere ya na kichin, ọ na-aghọ kpakpando nke kichin anyị. Ebe ọ bụ na anyị goro ndị ọrụ ọkpọ ọkpọ iji wụnye, ihe niile gara nke ọma, na ikuku nkụ mmiri na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ruo ugbu a, ahụrụ m ya n'anya!
Igbe nke ngwaahịa a batara nyere ya ka ebupu ya n'enweghị akara ọ bụla nke ọla na-ehicha igwe. Akụkụ nke etinyere na mgbidi ahụ dị mfe iji bilie ka anyị na-ele anya site na ụlọ ọhụụ. Cant na-ekwu okwu itinye mgbidi dị adị. Ngwaahịa ahụ bịara na mpempe allen iji wụnye di na nwunye ahụ. Ọ na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ha na-atụ anya tinyekwara obere teflon teepu ma igbe ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ pọmpụ nwere ya. Akwụkwọ ntuziaka ahụ dị mfe ịgbaso. Lelee ịntanetị iji hụ ókè mgbidi ị kwesịrị ịwụnye ọkpọkọ dị ka ịchọrọ ka ọ nwee ike jupụta ite ma n'otu oge ahụ agaghị akụ microwave gị elu.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị etinyela ite mmiri, onye ọ bụla nwere obi abụọ ma kwuo na agaghị m eji ya ma ọlị. Ha hiere ụzọ! Ka ị na-etolite ite ite a na-enyere gị aka ịghara iji mmiri buru ite dị ọkụ na stovu. Ọtụtụ onye isi nri ma ọ bụ onye ọ bụla na-esi nri kwa ụbọchị ga-ahụ nke a n'anya ma hụ na ọ bara uru. M hụrụ n'anya imewe na aka. Nani ihe m nwere bu mgbe stovu di na ite ite di n’elu okpomoku, o nwere ike imebi ihe? Ruo ugbu a enwere m 6 burners m na-agba mbọ ka m ghara iji burner nke dị na nri nke ite ahụ. Na-atụ aro.
M *** n2020-09-27
Mara mma, mere nke ọma ite ite. Ahụbeghị àgwà dị elu maka ọnụahịa ahụ. Ntinye kwenye. Agaghị eme otu ọzọ. A na-akwakọba ihe ahụ nke ọma, ọ nweghịkwa slack slack na ngalaba ahụ. Nke siri ike ma dịkwa ire ụtọ. Ọgwụgwụ zuru oke.
A na-eme ọwa ite a n’ụzọ mara mma ma na-eme mgbakwunye dị egwu na kichin ọhụrụ m. Onye na-egbu mmiri na-etinye ite dị mfe. Ọ na-egosi otu ebe ọ dịkwa mfe iji ya ga-enye ezinụlọ m ọ yearsụ ọtụtụ afọ.
Mfe echichi, na-ama ọmarịcha. Mmetụta siri ike na njikwa na-adị ire ụtọ. Naanị na ọ nwere otu izu. Dị ka ya ruo ugbu a.
Naanị wụnye ya., Ọ dị oke mma
WOWOW Kitchen Sink Mixer Tap But Spray Bru ...
WOWOW Commercial Kitchen ite dịanyukwu Pasta Arm C ...
WOWOW Mmanụ a na-ete ete maka ọla nchara
WOWOW Black Pot Filler Faucet Maka Na Na Na Na Na Na Na Na ...